Xildhibaan uga digay Madaxweyne Farmaajo inuu ku fekero “Muddo Kororsi” – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble ayaa, isaga oo wareysiinayey TV-ga RTN, sheegay inuu tuhunsan yahay in ay Xukumadda Soomaaliya ka fekereyso in ay dheereysato waqtiga ay dalka maamuleyso, “iyada oo daahineysa” buu yiri “diyaarinta nidaamkii doorasho ee lagu wajihi lahaa 2020-ka”. Waxa uu sheegay in ay ahayd in Xukumaddu 2-dii sano ee ay jirtay ay ku diyaariso Sharciga Doorashada dalka, “si” buu yiri “ay qof kasta ugu caddaato 2 sano kadib nuuca dooarsho ee Soomaaliya ka dhaceysa 2020-ka”.
“Waxyaabaha loo baahan yahah waxaa ka mid ah in la diiwaangeliyo dadkii wax dooran lahaa, in axsaabtii liiskooda la hubiyo, in sharcigii doorashada nafsaddiisa la keeno baarlamaanka” ayuu yiri Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble. “Marka, anigu waxaan qabaa in ay Soomaaliya yeelato nidaam degan, oo 4 sano oo walba waqtiga doorashada dhaceyso iyo qaabka ay u dhaceyso dadku ay og yihiin” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Waxa uu sheegay in Hogaanka dalka ee hadda ay, sidii kuwii ka horeeyey, ka fekerayaan sidii ay xukunka u sii haysan lahaayeen waqti ka badan 4-tii sano ee loo doortay hogaaminta dalka. “Aniga wey ila tahay in qof iyo cod lagu gaarsiin karo (dalka) 2 sano gudahood” ayuu yiri Xildhibaanku. Waxa uu sheegay in aysan axsaabta Soomaaliyeed marnaba raali ku noqon doonin in dib loo dhigo waqtiga doorashada Soomaaliya, laakiin ay diyaar u yihiin in qorshahaas lagu gaaro qof iyo cod ay Xukumadda kala shaqeeyaan.
Waxa uu sheegay in waxa ay og yihiin ay tahay in Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uu xilka kaga eg yahay 8-da Febaraayo, 2021. Haddii uu xiligaas waqti ku darsadana aysan aqbali doonin, sida uu hadalka u dhigay. “Wax haba yaraatee dadka Soomaaliyeed ama axsaabta Soomaaliyeed ay raali ku noqon karaan maaha” ayuu yiri Xildhibaan Cosoble. Haddii ay dhacdo waxa uu ka digayo ayuu sheegay in ay go’aan mideysan ka qaadan doonaan axsaabta iyo mucaaradka xukumadda.